Jamaika : Mitondra Otrikaretina VIH Aho · Global Voices teny Malagasy
Jamaika : Mitondra Otrikaretina VIH Aho
Voadika ny 19 Jolay 2017 1:35 GMT
Fantatra na aiza na aiza, ao Karaiba sy any an-toerana hafa, fa ny tahotra ny henatra sy ny fanilikilihana no isan'ny singa lehibe manakana ireo olona tratry ny aretina VIH/SIDA tsy hitady fikarakaràna na hanaiky imasom-bahoaka ny maha-olona voan'ny VIH azy ireo.
Kanefa, ho an'ity ramatoa ity, nopihana sary teny an-dalambe tao Kingston, Jamaique an'i Ria Bacon, mpampiasa ny blogger sy ny Flickr, tsy dia olana loatra ny henatra ny fiarahamonina. Araka izay soratan'i Bacon ao amin'ny bilaoginy:
“Rehefa nangataka taminy aho ho afaka maka sary azy, dia sosokevitra nomeko azy ny tsy hampisehoana ny sarin'ny endriny. ” Tsia r'ingahy,” hoy ny navaliny. “Angamba mba hisy olona haka lesona avy amin'ny hadisoako.”
Rehefa nasehoko azy ny sary, nitsiky tamin'alahelo izy: “Oyyyy, ratsy endrika be!”
Toerana faharoa monja manaraka ny faritr'i Afrika any atsimon'i Shara no misy an'i Karaiba, raha resaka taham-pitondràna ny otrikaretina VIH/SIDA. Ny faran'ny 2005 novinavinaina ho 25.000 eo ireo olona ao Jamaika – na 1.5% amin'ny vahoakany eo anelanelan'ny 15 sy 49 taona- no miaina miaraka amin'ny otrikaretina VIH/SIDA. Haiti, Bahamas ary Trinidad sy Tobago no faritra ao Karaiba manana ny isa tena avo indrindra amin'ny fitondràna ny otrikaretina VIH/SIDA.